Usoro na ọnọdụ nke biakwa obibia calender |
Nkwụnye ego £ 10 na- 25 spins on Gonzo Ọchịchọ Ihe
Nke a nkwalite ga-abụ kwa ụbọchị 3rd December 2016 (GMT).
The spins ga-ekwesị 20p na nti on Gonzo Ọchịchọ Ihe
Player ga-onye ọ bụla na-enweta a kacha nke 25 free spins on Gonzo Ọchịchọ naanị
Nke a nkwalite ga na--nti na gị mbụ nkwụnye ego nke na n'ụbọchị ị na-eji daashi Code “GONZO25”
Iji rụọ ọrụ spins Player ga ẹkedori Gonzo Ọchịchọ Ihe
Naanị wagering on egwuregwu ndị a na: Starburst, Gonzo Ọchịchọ Ihe, ejima akpa ogho, Spinata Grande, pyramid, Piggy Riches, South Park, Jack Hammer, nkpọye Heroes, dazzle Me, Neon Stax, Dracula, Jack na The
Beanstalk, mmeri, ukwu Rush, ọkụ, Disko spins, Koi Princess, Mythic Nwata nwaanyị, Edemede, akwụkwọ mmado, Magic Portals, Blackjack Classic, mkpụrụ Shop, okooko osisi, Steam Tower, Fisticuffs, kechioma angler, Tonado Farm Ụzọ Mgbapụ, Subtopia, Jack Hammer 2, Ọdịda nnukwu, -adịghị ahụ anya Man, South Park 2 ukwu Ọgba aghara, Eze Ohere mepere, ọbịa, -egbukepụ egbukepụ, Guns n roses, Master nke Mystery, Drive, Aloha, Jimi Hendrix, agbachitere Cup, Nrvna, Mgbe Ezi ofufe, Motorhead, Nzuzo nke Atlantis, Secrets of Christmas will count towards the reduction of the wagering requirement
Nkwụnye ego £ 10 na- 10 spins on Gonzo Ọchịchọ Ihe
Nke a nkwalite ga-abụ kwa ụbọchị 2nd, 10nke na 17 December 2016 (GMT).
A bonus nke 10 Spins ga-atụkwasịkwara akaụntụ gị.
Ndị a spins ga-ekwesị 20p na nti on Gonzo Ọchịchọ naanị
Player ga-onye ọ bụla na-enweta a kacha nke 10 free spins on Gonzo Ọchịchọ Ihe
Nke a nkwalite ga na--nti na gị mbụ nkwụnye ego nke na n'ụbọchị ị na-eji daashi Code “GONZO10”
Naanị wagering on egwuregwu ndị a na: Starburst, Gonzo Ọchịchọ Ihe, ejima akpa ogho, Spinata Grande, pyramid, Piggy Riches, South Park, Jack Hammer, nkpọye Heroes, dazzle Me, Neon Stax, Dracula, Jack na The Beanstalk, mmeri, ukwu Rush, ọkụ, Disko spins, Koi Princess, Mythic Nwata nwaanyị, Edemede, akwụkwọ mmado, Magic Portals, Blackjack Classic, mkpụrụ Shop, okooko osisi, Steam Tower, Fisticuffs, kechioma angler, Tonado Farm Ụzọ Mgbapụ, Subtopia, Jack Hammer 2, Ọdịda nnukwu, -adịghị ahụ anya Man, South Park 2 ukwu Ọgba aghara, Eze Ohere mepere, ọbịa, -egbukepụ egbukepụ, Guns n roses, Master nke Mystery, Drive, Aloha, Jimi Hendrix, agbachitere Cup, Nrvna, Mgbe Ezi ofufe, Motorhead, Nzuzo nke Atlantis, Secrets of Christmas will count towards the reduction of the wagering requirement
50% Dakọtara ruo £ 100
Nke a nkwalite ga-abụ 7th December (GMT).
Iji ruo eruo maka bonus, Player ga-edebekwa a nke kacha nta nke £ 10 na n'ụbọchị nke nkwalite.
A bonus nke 50% nke gị ego ruo a kacha nke £ 100 ga-atụkwasịkwara akaụntụ gị.
Nke a bonus ga-abụ na gị mbụ nkwụnye ego na nkwado, oge ị na-eji ego koodu “iri ise”
Nke a nkwalite nwere ike na-arụ ọrụ otu ugboro n'ime nkwado oge.
Nkwụnye ego £ 10 na- 50 Gonzo spins
Nke a nkwalite ga-abụ nke 23 December 2016 (GMT).
Player ga-onye ọ bụla na-enweta a kacha nke 50 free spins on Gonzo Ọchịchọ Ihe.
Nke a nkwalite ga na--nti na gị mbụ nkwụnye ego nke na n'ụbọchị ị na-eji daashi Code “GONZO50”
200% Dakọtara ruo £ 40
Nke a nkwalite ga-abụ 4th, 13nke, 16nke na nke 21. December (GMT).
A bonus nke 200% nke gị ego ruo a kacha nke £ 40 a ga-atụkwasịkwara akaụntụ gị.
Nke a bonus ga-abụ na gị mbụ nkwụnye ego na nkwado, oge ị na-eji ego koodu “200”
100% Dakọtara ruo £ 100
Nke a nkwalite ga-abụ 1st, 5nke, 8nke, 15nke na 22 December (GMT).
A bonus nke 100% nke gị ego ruo a kacha nke £ 100 ga-atụkwasịkwara akaụntụ gị.
Nke a bonus ga-abụ na gị mbụ nkwụnye ego na nkwado, oge ị na-eji ego koodu “100”
Nkwụnye ego £ 10 na- 25 Starburst spins
Nke a nkwalite ga-abụ kwa ụbọchị 6 na 12 December 2016 (GMT).
Ndị a spins ga-ekwesị 10p na nti on Starburst naanị
Player ga-onye ọ bụla na-enweta a kacha nke 25 free spins on Starburst
Nke a nkwalite ga na--nti na gị mbụ nkwụnye ego nke na n'ụbọchị ị na-eji daashi Code “STAR25”
Iji rụọ ọrụ spins Player ga ẹkedori Starburst
300% Dakọtara ruo £ 30
Nke a nkwalite ga-abụ usen 9 na nke 19 December (GMT).
A bonus nke 300% nke gị ego ruo a kacha nke £ 30 a ga-atụkwasịkwara akaụntụ gị.
Nke a bonus ga-abụ na gị mbụ nkwụnye ego na nkwado, oge ị na-eji ego koodu “300”
Nke a nkwalite ga-abụ kwa ụbọchị 18 December 2016 (GMT).
The spins ga-ekwesị 10p na nti on Starburst naanị
Player ga-onye ọ bụla na-enweta a kacha nke 10 free spins on Starburst
Nkwụnye ego £ 10 na- 100 Starburst spins
Nke a nkwalite ga-abụ kwa ụbọchị 14, 20nke na 24th December 2016 (GMT).
A bonus nke 100 Spins ga-atụkwasịkwara akaụntụ gị.
Player ga-onye ọ bụla na-enweta a kacha nke 100 free spins on Starburst
Nke a nkwalite ga na--nti na gị mbụ nkwụnye ego nke na n'ụbọchị ị na-eji daashi Code “STAR100”
Ozugbo ihe si n'aka gị bonus spins ịnọgide irè n'ihi na 7 ụbọchị. I kwesịrị ghara mezue wagering chọrọ na oge a, fọdụrụ bonus ego site na nke a nkwalite ga-ewepụ akaụntụ gị.
Player na-eti na naanị otu FreeSpin bonus nwere ike nọ n'ọrụ n'otu mgbe, biko gaa na “akaụntụ M” ngalaba na-ele gị dum bonus kwụ n'ahịrị
Usoro na Ọnọdụ – Gonzo’s Quest for Love –…
Usoro na Ọnọdụ – 100% match up to £100 +…
Usoro na Ọnọdụ-daashi spins Thursdays
Usoro na ọnọdụ – Nzuzo nke Christmas…
Usoro na ọnọdụ nke Daily daashi spins